Umbala we-Acrylic Sheet, Sheet ecacileyo, ibhafu ye-Acrylic-Iphaneli ye-Acrylic
I-Chengdu Cast Acrylic Panel Co., Ltd. (CDA) yinkxaso-mali epheleleyo yeQela leMonarch.
Ukudlulisela kwinkxaso yezobuchwephesha ekhokelayo kwi-Mitsubishi Rayon Co., Ltd., kunye nokudibanisa i-R & D, imveliso, ukuvelisa kunye nokuthengisa, i-CDA ivelisa amashiti e-acrylic phantsi kwegama likaDuke, elikwindawo ekhokelayo kwicandelo lase-China le-PMMA. Izisombululo zamashiti e-Acrylic kuthintelo lwesandi, ukhuselo lokusingqongileyo kunye nokuncitshiswa kwengxolo okubonelelwe nguDuke kusetyenzisiwe kwinani leeprojekthi ngempumelelo. Ngombulelo kukwamkelwa okuphezulu kwintengiso, i-CDA yaba lilungu leenkampani ezijongiweyo kwi "Atlas esemgangathweni yesandi isithintelo kwiNdlela yeDolophu yaseTshayina"
IPhaneli yeSithintelo seSandi seAcrylic
Inikezela ngokuchasene nefuthe kunye nokukhuseleka okuyimfuneko kwindlela eziphakamileyo, ngelixa zibonelela ngeembono ezingaphazanyiswanga ukugcina ubuhle bendalo kunye nokuhanjiswa kokukhanya.
Iishiti ze-Duke® ze-acrylic ziyahluka kwaye zikwenza ubenamathuba okucinga: i-aquariums, izindlu zangasese, imoto, umhombiso, i-elektroniki, ifanitshala, i-glazing, ukukhanya, imiqondiso, ishelfu, isithintelo sesandi, njl njl Izinto ezifanelekileyo kwizicelo ezahlukeneyo zamacandelo akho anomdla.
Iziphumo zonyaka zeenkampani ziitoni ezingama-15,000, kwaye siya kuzigcina ngokweenguqulelo zentengiso.
Uvavanyo olunobuninzi bekhonkco.
ISebe le-R & D elizimeleyo.
Umgangatho wokuqala wamabanga aphakamileyo.
Inkampani yasekwa ngo-2007, kwaye isebenza nemitsubishi kangangeminyaka eli-14, sisebenzisa kuphela i-100% yeMitsubishi MMA entsha. Iziphumo zonyaka zeenkampani ziitoni ezingama-15,000, kwaye siya kuzigcina ngokweenguqulelo zentengiso. IMitsubishi liqabane lethu lobuchule. Xa izinto ezingafunekiyo zinqongophele, inkampani yethu iyakonwabela ukubekwa phambili. Isebe le-r & d elizimeleyo, elijongene nokuphucula ukusebenza kwe-acrylic. Uluhlu oludwelisiweyo, kukho inkqubo yolawulo olungqongqo, ukuqinisekisa ukungqinelana komgangatho wemveliso yokuhlola umgangatho wemveliso, ikhwalithi efanelekileyo ingaphezulu kwama-99.99%, ukuqinisekisa ukuba ufumana iimveliso ezikumgangatho ophezulu ezingeniswe eJapan iMitsubishi monomer njengezinto ezingafunekiyo, isiJamani izixhobo ezingenisiweyo